Best Gzl200 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
The igwe adopts abụọ-ogbo ịghasa nri system.horizontal ejima-ịghasa nri na pụrụ iche cantilever imewe, nke mma nso nke nhazi ihe na ihe ịga nke ọma ọnụego na mkpụrụ nke granulation;
A na -ejikarị akọrọ akọrọ na ọgwụ, nri, chemicaland ụlọ ọrụ ndị ọzọ.Ọ dabara adaba maka nsị nke ọgwụ na -emebi ngwa ngwa site na iru mmiri, ọ dị mfe ịmịkọrọ mmiri, na -enwe mmetụta maka ikpo ọkụ, na enwere ike iji irighiri ihe mee ihe iji meziwanye mmiri mmiri, mkpakọ mbadamba, Akụrụngwa na mkpuchi ihu maka akpa.Dabere na ọtụtụ uru, a na -eji ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ojiji nke ihuenyo mmetụ mmiri kristal na teknụzụ njikwa akpaka dị iche iche iji meziwanye mgbanwe na nchekwa nke mpaghara a na-ebugharị ekewapụ na mpaghara na-arụ ọrụ iji rụpụta ihe dị ọcha na emechiri emechi site na ntụ ntụ ruo na granules, na nsonaazụ mmepụta na-egbochi uzuzu na mmetọ obe, a na -ejikọkwa akụkụ niile kọntaktị yana ihe dị mfe.
Ejiri igwe anaghị agba nchara dị elu na ihe kọntaktị bụ 316. Nrube isi zuru oke na GMP chọrọ maka mmepụta ọgwụ.
Ihe nkedo nke mmiri jụrụ oyi nwere ihe arụnyere maka nbata na ọpụpụ, yana ihe nnwale anaghị ekpo ọkụ n'oge usoro mgbasa ozi, nke na-emetụta akụrụngwa ihe.
A na -eji igwe anaghị agba nchara pụrụ iche na -eme ihe nrịba mgbali, elu ya nwere oke ike na adịghị ike.
Akụkụ kọntaktị na ọdịdị igwe niile nwere ọgwụ a bụ nke igwe anaghị agba nchara 316L (ewezuga akụkụ ike igwe). A na -egbu ihe dị n'ime ya na -enweghị akụkụ nwụrụ anwụ, ọ dịghịkwa mfe ịchekwa ihe. Ọdịdị mpụga dị mfe, dị larịị ma dịkwa mfe ihicha. A ghaghị ijide n'aka na ihe ndị ọzọ agaghị adapụ, enweghị ntụpọ, na-eguzogide corrosion, na-eguzogide ọgwụ ma dịkwa mfe ihicha. Ngwa pipeline bụ igwe anaghị agba nchara 304.
Akụkụ niile dị na kọntaktị ọgwụ (oghere na -arụ ọrụ) bụ nke edochiri anya ma nweere onwe ya, akara ahụ nwere ọkwa abụọ ma ọ bụ karịa iji hụ na ihe dị ọcha chọrọ yana gbochie mmetọ. Ihe a na -emezu ọkwa ọkwa nri, a ga -enyekwa asambodo ahụ.
Nke gara aga: GZL150 akọrọ granulator
Osote: GZL240 akọrọ granulator
Akọrọ Granulation Equipment
Akọrọ Granulator Maka ọgwụ na nri
Akọrọ Powder Granulator Machine
Pharmaceutical kpọrọ nkụ Granulator N'ihi Lab
GZL240 akọrọ granulator